Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - SS 4T 2016
NY BOKIN'I JOBA
OKTOBRA - NOVAMBRA - DESAMBRA
Lesona 1 NY FARANY 24/09 - 30/09
Lesona 2 ILAY FIFANANDRINANA LEHIBE 01/10 - 07/10
Lesona 3 FAHATAHORANA AN'ANDRIAMANITRA? 08/10 - 14/10
Lesona 4 NY FAHORIAN'OLOMBELONA 15/10 - 21/10
Lesona 5 MANOZONA NY ANDRO 22/10 - 28/10
Lesona 6 FANOZONAM-POANA HOE? 29/10 - 04/11
Lesona 7 FAMAIZANA FAMALIANA 05/11 - 11/11
Lesona 8 RA MARINA 12/11 - 18/11
Lesona 9 SORITRA FANANTENANA 19/11 - 25/11
Lesona 10 NY FAHATEZERAN'I ELIHO 26/11 - 02/12
Lesona 11 AVY TAO AMIN'NY TAFIO-DRIVOTRA 03/12 - 09/12
Lesona 12 NY MPANAVOTRA AN'I JOBA 10/12 - 16/12
Lesona 13 NY TOETRY JOBA 17/12 - 23/12
LESONA 14 IREO LESONA AVY AMIN'NY BOKIN'I JOBA 24/12 - 30/12
Manana antony tena tsara tokoa ny Kristianina hinoana an’Andriamanitra. Izany antony izany dia manohitra ireo faharesen-dahatra sandoka saika manjo ny rehetra eto amin’izao tontolo izao. Antitranterin’ny manam-pahaizana sasany izay tena manana ny maha-izy azy sy marani-tsaina indrindra fa ny foto-kevitra momba ny fivoarana miandalana (évolutionnisme) no afaka hanazava izay rehetra heverina ho hafahafa, kanto ary saro-takarina momba ny fiainana. Olona maro eto amin’izao tontolo izao anefa no tsy manaiky ny foto-kevitra voizin’ny fivoarana miandalana. Maro ireo petra-kevitra siantifika milaza fa niainga avy tamin’ny “tsy misy” izao tontolo rehetra izao. Ny ankamaroan’ny olona anefa dia mihevitra fa azo antoka kokoa ny mino fa avy tamin’Andriamanitra Mpamorona anankiray no nisian’izao tontolo izao, fa tsy hoe avy tamin’ny “tsy misy”.
Manana antony tena tsara tokoa isika hinoana ny famoronana. Mbola eo ihany anefa ny olana mikasika ny fomba niavian’ny ratsy. Izany olana izany no mitarika antsika ho eo amin’ilay fanontaniana miverimberina hoe: Raha misy tokoa Andriamanitra, ary raha tena tsara sy be fitiavana ary mahery tokoa Izy, nahoana no misy ny fahoriana be toy izao?
Miresaka io fanontaniana miverimberina io ny bokin’i Jôba ary mahaliana tokoa ny mahafantatra fa izy dia anisan’ireo boky ao amin’ny Baiboly izay nosoratana voalohany indrindra. Efa taloha ela araka izany no nanomezan’Andriamanitra antsika valinteny momba ny olana sarotra indrindra amin’ny olana rehetra.
Valinteny sasantsasany ihany fa tsy izy rehetra. Tsy misy boky na dia iray aza ao amin’ny Baiboly ka afaka hamaly azy rehetra. Ary, eny, fa na dia ny Baiboly iray manontolo aza. Na izany na tsy izany, ny bokin’i Jôba dia manala sarona ka mampiseho amin’ny mpamaky fa misy Andriamanitra velona tsy takatry ny fisainantsika. Asehon’ny bokin’i Jôba amintsika ihany koa izay ambaran’ny maro amin’ireo boky sisa ao amin’ny Baiboly. Asehony fa mifandray mandrakariva ireo zavatra azon’ny siansa hazavaina sy ireo tsy azony hazavaina. Ny tantaran’i Jôba dia ohatra iray ny amin’ny fitsipika sy fampitandremana nomen’i Paoly an’arivon-taonany lasa manao hoe: “Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra” - Efes. 6:12.
Na dia ny lehilahy iray aza no tena iompanan’ny bokin’ny Jôba betsaka indrindra, dia tantarantsika rehetra ihany koa izany, satria samy mijaly avokoa isika amin’ny fomba izay matetika no toa tsy mety ho takatry ny saina. Ary, eny, fa na dia ny tantaran’ireo efa-dahy izay nanatona an’i Jôba aza dia maneho ny toe-javatra misy antsika ihany koa. Iza tamintsika no tsy efa niezaka ny hahazo an-tsaina ny antony mahatonga ny olona ho ory?
Tsy ho voadinitsika anefa ny lafiny iray tena lehibe momba ny bokin’i Jôba raha toa ka feratsika eo amin’ny fiezahan’ny olombelona mijaly hahatakatra ny fahorian’ny hafa fotsiny ihany ny fianarantsika. Miseho ao anatin’ny tontolon-kevitry ny ady lehibe ifanandrinan’i Kristy sy i Satana ny tantara. Voafaritra mazava tsara ho tolona ara-bakiteny mianjady amin’ny fanahin’ny olombelona izany ady izany. Io ilay niantomboka tany an-danitra ary mbola mizotra hatramin’izao etỳ an-tany, ao am-po sy ao an-tsaina ary ao amin’ny tenan’ny olombelona tsirairay avy.
Momba ny tantaran’i Jôba ny lesona amin’ity telovolana ity. Mandinika akaiky sy avy lavitra ny fahoriany izany. Fantatsika ny fihafaran’ny boky, ary fantatsika ny tontolon-kevitra mivelatra kokoa ao ambadiky ny tantara. Amin’ny maha-mpamaky antsika dia mahazo fahalalana ny amin’ny bokin’i Jôba isika ary koa ny Baiboly iray manontolo. Ampiasaintsika izany fahalalana izany hahatakarana araka izay azo atao ny valin’ireto fanontaniana roa manaraka ireto: Nahoana isika no miaina ao amin’ny tontolo iray izay anjakan’ny ratsy? Ahoana no tokony ho fomba fiainantsika ao anatin’izany tontolo izany?
Mazava loatra fa na dia aorian’ny fandinihantsika ny bokin’i Jôba aza, miaraka amin’ny fanampian’ireo boky sisa ao amin’ny Baiboly, dia mbola mitoetra ihany ny olana momba ilay fanontaniana miverimberina. Mahazo matoky anefa isika fa ny valiny maharitra mandrakizay dia ao amin’i Jesôsy Kristy. Ao amin’i Jesôsy no “ananantsika fanavotana amin'ny rany” (Efes. 1:7). Amin’ny alalany no hahazoana ny valinteny rehetra.
I Clifford R. Goldstein no tonian-dahatsoratry ny Taridalana Fianarana Baiboly ho an’ny Sekoly Sabatan’ny Lehibe. Efa tamin’ny taona 1984 no nanombohany nanompo tany amin’ny Foiben’ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito Maneran-tany.